Ugu yaraan labo qof oo ku dhimatay weerarka dhiigyacabnimo oo ay Somaliland kala hortagtay shacabka Laascaanood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan labo qof oo ku dhimatay weerarka dhiigyacabnimo oo ay Somaliland kala hortagtay shacabka Laascaanood
May 29, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia, Somaliland 0
Dad mudaharaad ka dhan ah Somaliland ka sameeyay Laascaanood 28-dii May, 2018. [Sawirka]
Laascaano-(Puntland Mirror) Shalay oo ahayd 28ka May 2018 mudaaharaad nabadgelyo ah oo ay dhigayeen shacabka magaalada Laascaanood ayaa isu bedelay qalalaase dhiig ku daatay ka dib markii maamulka Soomaaliland ay kala hortageen weerar arxan daro iyo xoog-sheegasho ah dadkii mudaharaadayey iyaga oo u isticmaalay rasaas nool.
Ilo ay Puntland Mirror soo xigatay oo ku sugan magaalada Laascaanood ayaa xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan laba qof iyo dhaawaca ilaa sideed qof. Dad ku dhow illaa 64 qof ayaa la sheegay in la xirxiray oo loo qaaday xabsiyo meelo ka baxsan gobolka Sool, dadkaas oo u badnaa dumar iyo caruur. Dadka halkaas sida arxan darada loogu diley waxaa ka mid ahayd haweeney lagu magacaabo Cambaro Siciid. Waxaa lagu soo waramayaa in amarka weerarkaas dadka sida aan kala sooca lahayn rasaasta loola dhacay uu bixiyey guddoomiyaha gobolka Sool, mudane Cabdi Khayre Dirir.
Guddoomiyaha gobolka Sool, mudane Cabdi Khayre Dirir. [Sawirka]
Dad goobjoogayaal ah oo codsaday inaan magacooda la sheegin waxay u xaqiijiyeen Puntland Mirror in Soomaaliland ay isticmaashay ciidanka RRU oo ay tababarto dhaqaalahana ka bixiso dowlada Britian. Eedeyntani waxay keenaysaa su’aalo ku saabsan ilaa xad inta dowlada Ingiriisku ay ka ogtahay isticmaalka ciidanka, oo haddii ay rumowdo, keeni karta in dowlada Ingiriisku ku lug yeelato dagaalada qabaa’ilka ee Soomaaliya, taasoo keeni karta inaan la jeclaysan ka qaybqaadashada dowlada Britain ee dadaalada beesha caalamku ku dooneyso in ay xal nabadgelyo oo waara loogu helo dagaaladan.
Waxaa kale oo lagu eedeynayaa Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey Michael Keating oo isaguna u dhashay dalkaas Britain inuusan ka qaadan hogaamin muuqata iyo dhexdhexaadin adag oo aan eexasho lahayn dagaaladan. Warbixintii uu siiyey Qaramada Midoobey kuma uusan xusin in dagaaladan ay ka dhasheen gardarada ay Soomaaliland ku soo weerartay Puntland ee deegaanka Tukaraq.
Dad badan oo reer Puntland ah ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin weerarka dhiigu ku daatay ee loo geystey dadka shacabka aan hubaysnayn magaalada Laascaanood. Waxay dalbanayaan baaritaan degdeg ah oo madax banaan in lagu sameeyo weeraradan arxan darada ah ee lagu hayo shacabka iyo ku xadgudubka qaawan ee xuquuqul insaanka shacabka gobolka Sool.